Ukubukwa Kwasezulwini nezinkumbulo ezikhethekile zeNgqungquthela Siesta - I-Airbnb
Ukubukwa Kwasezulwini nezinkumbulo ezikhethekile zeNgqungquthela Siesta
Phumula uye e-Summit Siesta bese uthola ukuzikhipha kwakho entabeni yase-Breckenridge. I-Summit Siesta iyindawo ekahle kakhulu yokuphumula nokukhululeka ozofuna ukubuyela kuyo unyaka nonyaka. Ngokubukwa kwama-dollar ayizigidi eziningi ekamelweni elithokomele, uzothokozela bonke ubuhle obuhlaba umxhwele bezintaba zethu eziphakeme zisuka egumbini lokuphumula.
Leli khaya lingathatha abantu abangaba ngu-12 abanamakamelo okulala angu-4 namagumbi okugezela angu-3.5 kanye namafidi angaphezu kuka-3000 sq wendawo yokuhlala. Ikamelo elihle elinezinto zokhuni kuyo yonke indawo livulekile futhi livulekile futhi lifudumeza ikhaya nge-fireplace yegesi enamatshe amahle. Ikhishi elinakho konke libuyekezwe nge-granite nezinto zikagesi zensimbi engagqwali futhi linezinto zonke ozidingayo ukuze ulungiselele ukudla komndeni. Itafula elikhulu legumbi lokudlela lingahlala ngokunethezeka kuze kufike kubantu abangu-10 futhi kunezihlalo ezingu-4 eziseduze ze-bar.
Ezingeni eliyinhloko, uzothola ikamelo elihle elinosilingi abaphezulu elivulekele ikhishi nendawo yokudlela. Kukhona ubhavu owenziwe ngephenyane kuleli zinga kanye nekamelo lokulala elinemibhede emibili emibili emibili ngayinye enombhede ophindwe kabili ngaphansi. Kukhona igumbi lokugezela elihle lika-Jack no-Jill phakathi kwamagumbi angu-2. Uma ungena egumbini eliphezulu, uzothola ikamelo elikhulu elinombhede omkhulu negumbi lokugezela elinobhavu onama-jet neshawa ohlukile. Izinga eliphansi lekhaya linekamelo eliyisitezi elinombhede ogcwele ogcwele nosofa olalayo. Wonke amakamelo okulala anethelevishini yesikrini esicaba. Kukhona i-grill yegesi yokukujabulela. Uzothanda ukuba seduze nemizila yokuqwala izintaba neyamabhayisikili kanye nesitobhi sebhasi lamahhala sisekugcineni komgwaqo ukukuyisa edolobheni noma e-gondola.
Beka izinyawo zakho phezulu futhi uthathe lelo holide elifanelekile- i-Summit Siesta ikulindile!
Leli khaya linegalaji lemoto elishisayo elingu-2 kanye nokupaka imoto eyi-1 eyengeziwe. Sihlezi situsa imoto enamasondo angu-4 lapho ufika ezintabeni ngesikhathi sasebusika.
Leli khaya uhlangothi oluyi-1 lwe-duplex enkulu kakhulu futhi inamazinga angu-3.
Ilayisensi Yebhizinisi le-Breckenridge 4555555